Al-Shabaab oo sheegtay in ay qabsatay diyaarada aan duuliyaha lahayn ee Maraykanka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaAl-Shabaab oo sheegtay in ay qabsatay diyaarada aan duuliyaha lahayn ee Maraykanka
October 16, 2016 Abdi Omar Bile Somalia 0
Diyaarada aan duuliyaha lahayn ee Maraykanka. [Sawirka: AFP]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kooxda hubaysan ee Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay qabsatay diyaarada aan duuliyaha lahayn kadib markii ay ku burburtay deegaan u dhow magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya.
Ma cadda waxa soo riday diyaarada iyo dalka iska-leh, balse kooxda ayaa sheegtay in diyaarada ay leeyihiin Maraykanka ayna u isticmaalayeen sahaminta iyo ishaafalataynta.
Bishii Juun ee sanadkan 2016-ka, Al-Shabaab ayaa qabsatay diyaarad aan duuliyaha lahayn oo hubaysnayd kadib markii ay ku burburtay gobolka Shabeelaha Hoose ee koonfurta Soomaaliya.
Maraykanka ayaa u isticmaala diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay ugu weeraraan maleeshiyada Al-Shabaab ee koonfurta Soomaaliya. Bishii September 2014-kii, hoggaamiyihii ruuxiga ahaa Axmed Cabdi Godane oo loo yaqiin Abu Subayr ayaa lagu dilay duqayn ay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Maraykanka.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan hal qof ayaa lagu dilay qarax gaari oo ka dhacay gudaha Muqdisho maanta oo Isniin ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo. Qaraxa ayaa dhacay markii gaari walxaha laga soo buuxshay uu ku qarxay [...]